child care – Healthy Life Journal
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. ကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြင်ပပစ္စည်းဝင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ်။ NNW(FB) A. များသောအားဖြင့် ကလေးတွေမှာ တစ်ခါတလေကျရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို မလိုလားဘဲနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောက်တတ်ပါတယ်။ ကလေးအရွယ်တွေဟာ...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— မိဘတွေက ကလေးတွေနဲ့အတူ ခရီးသွားကြပါတယ်။ တချို့မိဘတွေဆိုရင် ကလေးခြောက်လအရွယ်လေးနဲ့ ခရီးသွားတာရှိတယ်၊ တစ်နှစ်အရွယ်ကို ခရီးခေါ်သွားတာရှိတယ်၊ အသက်တစ်နှစ်ကျော်၊ နှစ်နှစ်ကျော်ကလေးတွေကို ခရီးခေါ်သွားတာကတော့ သိပ်ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ငယ်တဲ့ကလေးတွေကျတော့ ခရီးပမ်းတာ၊ နေမကောင်းဖြစ်တာတွေ...
———၊ ကိုထက် ၊——— လူအများစုကတော့ ငယ်ငယ်က အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေ ရှိနေကြမှာပါ။ အဘိုးအဘွားတွေဆီက ရနိုင်မယ့် အမှတ်တရတွေကတော့ သူတို့ဘ၀တလျှောက် တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဘ၀ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ပုံပြင်တွေ၊ ဘ၀နေထိုင်နည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိုးအဘွားတွေရဲ့ ကြင်နာမှုတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရခဲ့ကြသလိုပဲ...
ကလေးမွေးပြီးစ ဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာတွေ သက်သာအောင် . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကလေးမွေးပြီးစမှာ ပုံမှန်လို နေထိုင်မကောင်းပါဘူး။ ပင်ပန်းသလိုလို၊ နွမ်းလျသလိုလိုနဲ့ နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ DawNilar (FB) A. ကလေးမွေးပြီးခါစမှာ ၀မ်းချုပ်မယ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မယ်၊ သွေးအားနည်းမယ်၊...
ကလေးများတွင် တွေ့ရတတ်သည့် မူမမှန် သွားနှင့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အလေ့အထများ
ဒေါက်တာထွန်းထွန်းလင်း သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် အပြုအမူတစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေတာကို အလေ့အထလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တဲ့ အလေ့အထနဲ့ မွေးရာပါ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အလေ့အထဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သွားနဲ့ ခံတွင်းကို ထိခိုက်စေတဲ့ မူမမှန်အလေ့အထတွေကတော့- (၁) လက်မစုပ်ခြင်း...
ကလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ . . .
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါဆိုတာ ကလေးတွေကို အချိန်ပေးဖို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို မုန့်ကျွေးရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ထမင်းကျွေးတာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး သူတို့ကို စနစ်တကျကျွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးစားထားလိုက်ဆိုပြီး ထားပစ်ခဲ့လို့မရပါဘူး။ လူကြီးတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ထင်ရပေမယ့် ကလေးတွေကို...
သင့်ကလေးငယ် အရွယ်အလိုက် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရဲ့လား
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ကလေးမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ အရွယ်အလိုက် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိရဲ့လားဆိုတာ မိဘတွေစိတ်ပူကြတဲ့ အချက်ပါ။ အသက် သုံးလအရွယ်မှာ – မိခင်မျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်မကြည့်တာ၊ – အသံပေးပေမယ့် အမူအရာ ပြောင်းလဲမှုမရှိတာ၊ ခြောက်လှန့်သံပေးလည်း မလန့်တာ၊...